यो भाइ’रल ‘भिडियो’ को विषयमा यस्तो भनियो!!
भर्खरै एउटा भिडियो भाइ’रल बन्यो जसमा एक जना युट्युबर ले अमर्यादित रुपमा एक विध्यालय की शिक्षिकालाई लेख्न नआएको विषयमा भिडियो बनाएर अप्लोड गरेको देखियो । उक्त भिडियो भाइ’रल भएपछी विभिन्न टिकाटिप्पणी हरु आए । त्यस्तै क्रममा सामाजिक कार्यमा सकृय रहेको युवाहरुको फेसबुक ग्रुप MRR (Men’s room reloaded) मा राखिएको एउटा पोस्ट अहिले हजारौले शेयर गरेकाछन । उक्त पोस्ट यस्तो छ :
“कति जनाको आमालाई kitchen को spelling थाहा छ ? कतिको आमालाई Struggle को spelling थाहा छ ? र कति को बाबालाइ life को spelling लेख्न आउछ ? न आए पनि कसरी उहाहरुले जीवन ,खुसि , दुख , संघर्ष सिका’उन सक्नु भएको होला ?
हो अहिलेका धेरै विद्या वारिधि गरेकाहरुलाई spelling न आउने गुरु बा आमाले नै पढाएका हुन। उहाहरुले वि’ज्ञान राम्ररी पढाउनु हुन्छ , लेख्नु हुन्छ तर Science को spelling आउदैन।
उहाहरुले भुगोल पढाउनु हुन्छ , तर Geography जान्नु हुन्न । गणित पढाउनु लेखाउनु हुन्छ तर Mathematics जान्नु हुन्न। अंग्रेजी भाषा नजान्ने , क्यामेरा अगाडि बोल्न ड’र मान्ने र सोझा
सिधा शिक्षक अझै पनि धेरै हुनुहुन्छ जो संग पढेर धेरै जना महान डाक्टर , इञ्जिनियर , मंत्री , प्रधानमंत्री बनि सके तर उहाहरुको स्थिति त्यहि पुराना काठका डेस्क
बेञ्चसंग खेल्दैमा बितेको छ । के अंग्रेजीमा केहि लेख्न न आउदै बेइजतको भागेदार बन्नु पर्ने ? हुन त Teacher खोजेकाहरुलाई गुरुबा गुरुमाको महत्व र सम्मानबारे के थाहा ? हाम्रा लागि क्लासमा फरर्र अंग्रेजीमा लेक्चर दिएर जाने Teacher भन्दा जीवन सिका’उने अंग्रेजी नजान्ने कुना कन्दरामा बसेका गुरुबा गुरुआमा ठिक हो ।
यसको अर्थ शि’क्षकहरु त्यहि अवस्थामा रहने भन्ने होइन , त्यसको विषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ । तर गुरु बा गुरु आमाहरुको यस प्रकारको बेइज्जत गर्ने Youtube stunt घात’क हो। पाका उमेरका शिक्षक शिक्षिकाहरुले त्यो बेला कसरी आफुले शिक्षा हा’सिल गर्नु भयो र शिक्षा क्षेत्रमा उहाहरुको के कस्तो योगदान र संघर्ष छ भन्ने पनि खोजि गर्ने हो कि ? अथवा पार्टीका भक्ते शिक्षकहरुको केहि कथा निकाल्ने हो कि ? शिक्षक शिक्षि’काको त्यो अवस्था कसको कारणले आएको भन्ने जवाफ सबैसंग छ । बोल्न सक्दैनन् त्यति हो । शिक्षामा जुवा खेल्ने हरुको कथा छ कि बजारमा ?
२०७८ भाद्र १०, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 171 Views